Nahatohina an’i Amerika Latina Ny Famonoan’ny Mpamily Taksy Cabify An’i Mara Castilla · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra J. Tadeo, Gabriela García Calderón Orbe Nandika (fr) i Véronique Lacoste, Liva Andriamanantena
Voadika ny 09 Oktobra 2017 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Italiano, Ελληνικά, Français, Español
Sarin'i Mara Fernanda Castilla, nozaraina betsaka tao amin'ny tambajotra sosialy.
Nahatezitra ny mponina tao Meksika sy ny firenena manodidina ny raharaha mikasika an'i Mara Fernanda Castilla, ilay tovovavy namoy ny ainy taorian'ny nandehanany fiarakaretsaka iray izay nokomandiany tamin'ny fampiasa Cabify.
Ny alin'ny 7 hifoha 8 septambra 2017, niaraka tamin'ireo namany i Mara Castilla tao amin'ny toeram-pandihizana iray tao San Andrés Cholula (ao amin'ny fanjakan'i Puebla, any atsinanan'ny firenena). Rehefa nifarana ny alina, ka handeha hody i Mara dia naka fiarakaretsaka iray tao amin'ny fampiasa Cabify izy… saingy tsy tonga tao an-tranony mihitsy .
Hita teny amin'ny lalana iray ao Puebla ny vatana mangatsiakany nofonosina lamba firakotra sy lamba fidiovana izay mitondra ny sary famantarana ny motely iray manodidina teo andro maromaro taorian'ny nitateran'ny fianakaviany ny fanjavonany. Efa nosamborin'ny manampahefana teo an-toerana ilay mpamily fiarakaretsaka fotoana fohy talohan'ny nahitana ny razana .
Nanao fanambarana tao amin'ny Twitter ny governora ao Puebla :
Manolotra ny fiaraha-miory amin'alahelo lehibe aho ho an'ny fianakavian'i Mara Castilla. Fiadanana ho an'ny fanahiny. Efa nosamborina ilay noahiahiana ho nahavanon-doza ary homelohina izy noho izany.
Hohelohina mafy ireo nahavanon-doza tamin'ny famonoana an'i Mara Castilla. Hodinihinay akaiky ny momba ireo arifenitra fiarovana manankery ao amin'ny Cabify Meksika.
Tato ho ato, tsikaritra fa efa nahazoana fitarainana maro avy amin'ireo mpanjifa ny tolotra Uber sy Cabify ao Meksika, noho ny tsy fahatomombanan'ny kalitaon'ny tolotra sy ny fihoaram-pefy atao amin'ny mpandeha.
Nentanina indray ny adihevitra momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy taorian'ny nahitana ny vatana mangatsiakan'i Mara, izay nahitana soritra herisetra ara-nofo maromaro, araka ny voalazan'ny loharanom-baovao sasany. Anatin'ireo sioka maro ny #SiMeMatan [#RahaVonoinaAho] tamin'ny volana May lasa teo, izay te-haneso ny famonoana vehivavy roa nahitana ny trangana herisetra fanavakavahana ara-pananahana, tsikaritra tao ny an'i Mara:
Raha vonoina aho dia satria tiako ny mivoaka alina sy misotro labiera be dia be …
Ity bitsika ity dia naverina vao haingana tao amin'ny tambajotra sosialy ho fahatsiarovana an'i Mara sy ireo niharam-boina hafa an-jatony tamin'ny heloka famonoana vehivavy
Raha vonoina aho dia heverina ho “famonoan'olona noho ny fitiavana izany” fa tsy famonoana vehivavy. Holazaina fa nandrangitra aho, ary niara-nivoaka tamin'ity zazalahy ity, fa hoe “makorelina” aho, mifoka rongony, ….
Ao ambadik'ireo vehivavy tsirairay izay nisioka ny #RahaVonoinaAho, dia nisy vehivavy iray nanao fanoherana nitaky hoe tsy tokony hisy vehivavy vonoina hafa intsony #NiUnaMas.
Raha vonoina aho dia azo antoka fa satria nankany amin'ny fampisehoana na ny teatira aho ny alina, ary azo antoka fa fahadisoako raha te hankafy ny fiainana aho.
Tamin'ny volana martsa 2016, noraisina an-tanàna ny andiana asa momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ary ny fanamafisana ny sezany no “vahaolana” hitan'ny governemanta . Nihaona tamin'ny mpisolovava iray manokana mikasika ity fotokevitra ity izahay tamin'ny volana Mey tamin'io taona io ihany, izay nanazava taminay fa efa mihazatra “miaina isan'andro amin'ity tahotra miafina ity” tsikelikely ireo vehivavy Meksikana .
Tsikaritra ny diabe fanoherana ny herisetra ataon'ny lehilahy sy ny tsy fahombiazan'ny manampahefana hisambotra sy hanasazy azy ireo tany amin'ireo faritra federaly miisa iraikambinifolo ao Meksika, .
Fihetsiketsehana niampita sisintany
Nanaraka ny raharaha mikasika an'i Mara Castilla ihany koa ny tao Però, ary nolazaina mikasika ny fivoaran'ny fanadihadiana ny fampahalalam-baovao nandritra ny andro maromaro mandra-pahita ny fatiny.
Nizara tao amin'ny pejiny Facebook momba ny diabe fihetsiketsehana # NiUnaMás ny vondrona Peroviana Ni una menos Perú Tocan a una, tocan a todas [Tsy mila vehivavy hafa [tratra] ankoatra izay, raha misy iray niharam-boina, ny vehivavy iray manontolo no voakasik'izany] .
Pikantsarin'ny pejy Facebook-n'ny vondrona Ni una menos Pérou izay nizara ny lahatsarin'ny fanentanana NiUnaMas tao Meksika mba hanoherana ny famonoana an'i Mara Castilla sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny firenena.
Navoaka tamin'ny gazety isankarazany tao Kolombia, Arzantina, Brezila ary Shily ny raharaha , ary na dia ny Firenena Mikambana aza dia naneho hevitra tamin'ny alàlan'ny sampanan'ny Firenena Mikambana Mujeres México [Vondron'ny Firenena Mikambana Vehivavy Meksika]
Manameloka ny famonoana an'i Mara Castilla ny Vehivavy Firenena Mikambana sy ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona ao Meksika .